छिमेकी राष्ट्रका सरकार प्रमुख नरेन्द्र मोदीको भ्रमणको सन्दर्भमा जे जस्तो वातावरण देखियो, वास्तबमा यो नहुनु पर्ने र लज्जास्पद भएको छ । हामीले हाम्रो कुटनैतिक स्तर, पाहुनाको सत्कारको संस्कृति अनि सम्मानको परम्परा स्खलित पारेका छौ ...
सरकार, राजनैतिक नेतृत्व बर्ग र हामी सर्वसाधारण स्वयम् एउटा अपरिपक्व संस्कारलाई प्रेरित गर्न हौसिएको देखियो । यो राम्रो होइन ।
एक त भ्रमणको औचित्यनै विरोधाभास र कुटनैतिक मर्म भन्दा बाहिर देखिएको छ ।
दोस्रो एक सार्बभौम राष्ट्रको सुरक्षा निकायलाई अयोग्य सावित गर्न विवादमा फसाइएको छ ।
तेश्रो, स्वतन्त्र मुलुकमा विदेशीलाई यसरी प्रवेश नगर्न भन्न नसक्ने सरकारको क्षमता पटक्कै देखिएन ।
बिदेशी पाहुना आउँदा नागरिक विभाजित हुने यो कस्तो मानसिकता विकास भयो ? किन ? यसको गम्भीर विश्लेषण हुनुपर्छ र यस्तो अस्वस्थ बाताबरणको निराकरण अनिबार्य छ, ताकि आगामी दिनमा यस्तो अक्षम्य गल्ती आन्तरिक रुपमा नदेखियोस् ।
२ नम्बर प्रदेश भनेको पनि नेपाल हो । विदेशीलाई गुहार लगाउने, उजुरी गर्ने, विभेद भयो भनेर रुने काम मोदीका सामु गर्नु भनेर मुख्य मन्त्रीलाई परराष्ट्रले अनुमति किन दियो ? यो सबैभन्दा गम्भीर विषय हो ।
सामाजिक संजालमा प्रस्तुत बिषय अनि प्रतिक्रियाहरु पढ्दा निचोड के निकाल्न सकिन्छ भने–
हामी कोही पनि सही मार्गमा छैनौ वा गन्तब्यको बिपरित मार्गमा फसिसकेका छौ । विदेशी चलखेल बढ्नुको कारण हामीमा कमजोरी छ ।
सबै पक्ष एक अर्काको दुरुपयोग गर्न प्रेरित छौ । सकारात्मक प्रस्तुतिले पनि प्रतिफल दिन सकेको छैन ।
जसले गर्दा देश बर्बाद भैसक्यो । यसको ज्वलन्त नमूना मोदीको भर्खर सम्पन्न नेपाल भ्रमण बन्नपुगेको छ । यसबाट सिख लिन जरुरी छ ।
नागरिकको ढोके प्रवृति, राज्यको अदुरदर्शिता, बिबेकहीता, गैह्र जिम्मेवार नेतृत्व बर्ग र हामी सबै दोषी छौ ।
एकता, शान्ति, स्थायित्व र सम्वृद्धिको बाधक अरु कोही होइन हाम्रो गलत नेतृत्व चुन्ने र दास मानसिकता नै हो । छोडौ हनुमान प्रवृति, बनौ साहसी र आत्मसम्मानको बाटो रोजौ । सोचौ एकपटक देशको लागि, बाद समूह बर्ग र क्षेत्र भन्दा माथि उठौं ।